Ị mara, mba ọ bụla bụ uniqiue. Mba ọ bụla ga-enweta ndepụta nke ihe ndị mere, Gịnị Mere na ya. Na ebe a bụ ndepụta nke ihe mere Ukraine. Ị ma ihe mere ọmụmụ na Ukraine ugbu a.
Ukrainian mahadum nwere n'ezie elu àgwà akụziri. A otutu unviersities nwere ọmụmụ na bekee ma ọ bụ Preparatory ngalaba n'ihi na amụ Russian ma ọ bụ Ukraine asụsụ.
Ụwa ghọtara Courses (Europe, UK, USA, Asia, Africa, WHO, UNESCO, European Council, wdg)
Ukrainian mahadum nwere niile a na-amata. Gị ubre ga-magburu onwe ya n'ụwa niile.
Medical ogo ghọtara site WHO, UNESCO, afo (UK), USMLE (USA), ofụri EU na iche iche International Organizations
Medical ọmụmụ bụ ndị kasị ewu ewu na Ukraing n'etiti ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ. Ị nwere ike easly amụ MBBS na Ukraine, n'ihi na ọ ga-ghọtara n'ebe nile World.
Nke a na okwu ndị scarry n'ihi na nnukwu ọnụ ọgụgụ nke mba ụmụ akwụkwọ. Ha pụtara mmezi ụgwọ na ike mbanye. Ma ọ dị mfe na Ukraine. Ị adịghị mkpa ime ihe ọ bụla nke a ule.
NO ỊBA ule, Naanị ụlọ akwụkwọ sekọndrị akwụkwọ maka Bachelor si Omume
-Ada ka a ọdụ, ma ọ bụ eziokwu. N'ezie mfe mbanye.
Nkuzi ego ugwo na mbata
A otutu nke ụmụ akwụkwọ na-achọghị iji kwụọ ụgwọ tupu mbata. Ebe i nwere ike ime nke a. n'aka, ị ga-akwụ maka òkù akwụkwọ ozi na ọrụ nke gị n'ụlọnga ma ọ bụrụ na ị na-eji ya, ma na agbanyeghị, fọrọ nke nta niile ego ị ga-akwụ bụ mgbe mbata na Ukraine. Gị ego gị bụ nchebe.
eri irè (ọnụ ala European mmụta)
-Achọ Europe mmụta na kasị ala nkuzi ụgwọ? Lee ya ebe a. Ukraine nwere n'ezie ọnụ ala mmụta
Ukraine nsogbu ke center na n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Europe. Ọ bụ kasị mba Europe. Ebe a bụ n'ezie Europe standarts nke ndụ na ala ahịa.
Mma Job olileanya
Ukraine bụ ebe dị mma maka ọrụ mmalite
Agafeghị oke Climate nile n'afọ
Ichefu banyere ịtụnanya na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ndụ oyi. All n'afọ mara mma Ukraine
Inwetara Ahụmahụ ruru ileta prọfesọ si USA, CANADA, UK, etc.
A nnukwu ọnụ ọgụgụ nke mahadum nwere mmekorita ya na USA, Canada na European unviersities. Ọ bụ gị ohere iji izute n'ụwa nile ma ama proffessors na Ukraine na kasị ala nkuzi ụgwọ.
Ohere nke-adịgide adịgide obibi & Mmezi na Europe mgbe ẹkụre ọmụmụ
Ọ bụ eziokwu. -Abụ ezigbo nwa akwụkwọ ị ga-enweta ike na-esi biri na mba dị na Europe.
100% Visa obi sie Ndị kwesịrị aga ime
One ọzọ plus – ị 100% esi visa ọ bụrụ na ị ga-amụ na Ukrainian mahadum.
Mgbe niile anyị dị nnọọ chọrọ ikwu, na Ukraine bụ n'ezie ịtụnanya na obodo na nnukwu ọnụ ọgụgụ ikike maka mba ụmụ akwụkwọ. -Amụ na Ukraine na ị ga-ada na ịhụnanya na ya. Gaa na Ukraine na ị ga-adịghị mkpa ajụjụ “Gịnị mere ọmụmụ na Ukraine?”
Best mahadum ịmụ nkà ọgwụ na Ukraine 2016